Isitudiyo se-Luxury Garden esine-AC & Gym kufutshane ne-Manyata - I-Airbnb
Isitudiyo se-Luxury Garden esine-AC & Gym kufutshane ne-Manyata
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguChandru
Esi situdiyo sikanokutsho sineyona ndawo ithe zava esixekweni ngoxa useBangalore. Isembindini wesithili esitsha seshishini laseBangalore, indawo ye-Jakkur-Sahakar nagar, kulula kakhulu ukuya kuyo usuka kwisikhululo seenqwelo-moya. Indawo yeholide yendalo engaphakathi esixekweni isembindini wegadi entle, elungiselelwe kakuhle, ekumgama omfutshane ukusuka kwichibi elihle laseRachenahalli. Seta ngezinto ezinokusetyenziswa zale mihla ibe ilawulwa ngababuki zindwendwe abakwizinga eliphezulu.
Indawo yokuhlala kanokutsho enabo bonke ubutofotofo bale mihla phakathi kwegadi entle enezinto eziphilayo. Ilungele ukuhlala okanye ukonwabela isixeko sasegadini ngomoya waso wokwenyani. Isitudiyo sendlu esemaphandleni yindawo yokuhlala evulekileyo, ikhitshi nendawo yokulala. Igumbi lokuhlambela lasentshona elineshawa eshushu yeeyure eziyi-24.
njengakwindawo ekufutshane e-Bangalore,kusenokubakho ingxolo yokwakha ngaphandle kwendlu yethu.
SiseJakkur 's Telecom layout, enye yezona ndawo zifunwa kakhulu kwindawo ethe cwaka nepholileyo yedolophu. Ingingqi yethu igcinwe kwichibi elihle laseRachenahalli. Iindwendwe zethu ziyakuthanda ukubaleka okanye ukuhambahamba echibini kusasa okanye ngokuhlwa. Ungahamba nje esitratweni ukuze ufumane ukutya okufreshi. I-Swiggy kunye ne-FreshMenu zizisa kwindawo. Kukho imidlalo yeqonga ekuhlaleni esitratweni apho abantu abasuka kwintsapho benza imini nobusuku.
Umbuki zindwendwe ngu- Chandru
UMYALEZO weCOVID: silandela ipolisi engqongqo kakhulu yokungasondeli ebantwini yakho kunye nokhuseleko lwethu kunye nokungasondeli ebantwini. Ngenxa yoko, naziphi na iingxaki zokulungisa ezingenakuvela zisenokungabikho ngoko nangoko. Nceda ulethe ingxelo yokuvavanya ye-rtpcr yakutshanje.
UMYALEZO weCOVID: silandela ipolisi engqongqo kakhulu yokungasondeli ebantwini yakho kunye nokhuseleko lwethu kunye nokungasondeli ebantwini. Ngenxa yoko, naziphi na iingxaki zokul…